Core i7 Processors များကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၀ယ်ယူရရှ&#414 — MYSTERY ZILLION
Core i7 Processors များကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၀ယ်ယူရရှ&#414
Intel ၏ နောက်ဆုံးပေါ် 8-cores နည်းပညာကိိုအသုံးပြုထားသော Core i7 Processors များကို မြန်မာနိုင်ငံစျေးကွက်အတွင်းသိို့ Golden Power Technology မှ စတင်တင်သွင်းရောင်းချနေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။ လတ်တလောတွင် Core i7 CPU နှစ်မျိုးတင်သွင်းထားသည်။ အဆိုပါ နှစ်မျိုးမှာ Intel Core i7 7920 နှင့် Intel Core i7 940 တို့ဖြစ်ပြီး Core Speed မှာ 2.66GHz နှင့် 2.93GHz အသီးသီးရှိကြောင်းသိရသည်။ စျေးနှုန်းမှာ Core i7 7920 မှာ $370 နှင့် Corei i7 940 မှာ $680 တို့ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ CPU များကို ASUS Motherboard များဖြစ်သော ASUS P6T Series လေးမျိုးနှင့် ASUS ROG Rampage II တစ်မျိုးနှင့် စုစုပေါင်း ငါးမျိုးတွင် သုံးစွဲနိုင်သည်။ အဆိုပါ Motherboard များတွင် Memory DDR III ကို support လုပ်ပေးနိုင်သည့်အပြင် Graphic အတွက် Nvidia SLI နှင့် ATI CrossFireX နည်းပညာနှစ်မျိုး စလုံးကို support လုပ်ပေးနိုင်သည်ဟု သိရသည်။
ကျွန်တော့်အထင်တော့ အဲဒီ Corei7 တွေက Core2Extreme CPU တွေထက် ပိုပြီးတော့ အသုံးပြုသင့်တယ်လို့ထင်တယ်ခင်ဗျ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Core2Extreme က $1000 ကျော်တယ်။ Speed ကတော့ Core i7 နဲ့သိပ်မကွာဘူး။
ကိုAlexander ရေ ရန်ကုန်ရောက်တုန်း Corei7 တစ်လုံးလောက် ၀ယ်သွားပါလားဟင်вЂ¦..။ သားကိုလည်း တစ်လုံး၀ယ်ပေးခဲ့:D
mmမှာက quard core တောင် ကောင်းကောင်းမသုံးနိုင်သေးဘူးလေ ဘယ်လို လုပ်ပြီး core i7သုံးနိုင်မှာလဲ...ပြီးတော့မကောင်းတာကကျွန်တော့်laptop က ခုမှ၀ယ်တာ core2duo <2.2Ghz> ဆိုတော့ ကျွန်တော် ၀ယ်တာမှသိပ်မကြာသေးဘူးdate out တော့မယ်:((:((:((:14::14::14:အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် ၀ယ်ပြီးရင်သယ်လို့မွဲကုန်မယ် (:68:
Core2duo တွေ date မ out နိုင်သေးပါဘူးဗျာ။
အခုချိန်ထိ P4 တွေ သုံးနေကြတာကိုပဲကြည့်ပေါ့။
အမှန်က Quad Core ကြီး၀ယ်ပြီး စာစီစာရိုက်လုပ်လိုက်၊ web surf လုပ်လိုက်ဆိုရင်တော့
အလဟသ ဖြစ်တာပေါ့ P3 နဲ့တင် လုံလောက်ပါတယ်။
P3 နဲ့ AutoCAD 2009 လိုမျိုးတော့ ဘယ်ရမလဲ။
ဆိုလိုရင်းကတော့ Date out တယ်ဆိုတာထက် ကိုယ်အသုံးချလိုမှုအတွက် လုံလောက်နေရင်
ဘယ်တော့မှ Date မ out ပါဘူး။
ဒါပေါ့ဗျာ။ လိုအပ်သလောက် အသုံးပြုလို့ရနေရင် တခြားအပိုမလိုအပ်ဘူးပေါ့နော်။ ၀ယ်လို့ရပြီဆိုတဲ့ အကြောင်းလေး သိစေချင်တာပါ။ ဘာရယ်မှတော့မဟုတ်ပါဘူး။။။။
မှန်ပါ့.. ကျွန်တော်တောင် စဉ်းစားနေတာ... Core ၈ ခုနဲ့ ကျွန်တော် webpage ရေးဖို့ လိုမှမလိုတာ... အဲ.. Gamer တွေအတွက်ကတော့ ရှယ်ပေါ့.... ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့ Core2Dual နဲ့လုံလောက်တယ်... Memory မြင့်ဖို့ပဲ.. Photoshop CS4 နဲ့ Dreamweaver CS4 သုံးဖို့အတွက်လေ.... Processor ကတော့ အခုအချိန်မှာတော့ မလိုသေးဘူး... Adobe CS 10 လောက်ဆို ပြောင်းရင်ပြောင်းရမှာပေါ့.. :P
မှန်ပါ့.. ကျွန်တော်တောင် စဉ်းစားနေတာ... Core ၈ ခုနဲ့ ကျွန်တော် webpage ရေးဖို့ လိုမှမလိုတာ... အဲ.. Gamer တွေအတွက်ကတော့ ရှယ်ပေါ့.... ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့ core2dual နဲ့လုံလောက်တယ်... Memory မြင့်ဖို့ပဲ.. Photoshop cs4 နဲ့ dreamweaver cs4 သုံးဖို့အတွက်လေ.... Processor ကတော့ အခုအချိန်မှာတော့ မလိုသေးဘူး... Adobe cs 10 လောက်ဆို ပြောင်းရင်ပြောင်းရမှာပေါ့..
ဟေ့လူကြီး ခင်ဗျားက ရိတာလား (ရိတာတော့ မဟုတ်လောက်ဘူး ပြဲတာနေမှာပါ အကျီင်္ အစုတ်ကြီး ၀တ်တာကို.:d) ဒါပေါ့ ram မြင့်ရမယ်...။ ထောက်ခံပါတယ်( ထောက်ခံရင် ဖုန်းပေးမှာလားဟင် ) နိုင်ငံရေးတွေပါကုန်ပြီ) တော်မှပဲ:d
မရိပါဘူးဗျာ.. ပိုက်ပိုက်မရှိလို့ ဖြေသိမ့်တဲ့ စကားတွေလေ.. ဟိဟိ
Core i7 သုံးဖို့အတွက် Graphic card4ခု , DDR3 memory3ချောင်း အနည်းဆုံး 1 GB လောက်
အဲလို ထည့်သွင်းထားမှသာ core 8 ခုလုံး အလုပ်လုပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Core i7, windows7စတဲ့7တွေကတော့ computer ခေတ်ပြောင်းတွေလို့ ဆိုလို့ ရလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။
ကျနော်ကတော့ ... 2009 နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်ကို Computer အသစ် ၀ယ်ဖို့တော့စဉ်းစားထားတယ်ဗျ ... ... Desktop or Laptop အဲဒီအချိန်မှပဲရွေးတော့မယ်။ မျှော်လင့်ထားတာက .... အဲဒီအချိန်လောက်ဆို Computer တွေစျေးကျသွားမယ်လို့ ...... ကမ္ဘာ့စီးပွားပျက်ကပ်ကြောင့်ကော ... တခြား အခြေအနေ အားလုံးကြောင့် စျေးတွေကျသွားလိမ့်မယ်လို့ ကျနော်ထင်တာပဲ ... ( ကျနော်တို့ လခတွေ မကျသွားဖို့လဲအရေးကြီးတယ်. ... ဟီးးးး )
Corei7 ... new generation Motherboard ... DDR3 Memory လေးတွေလဲအဲဒီအချိန်လောက်ဆို ... စျေးကျပြီး Reasonable Price ဖြစ်ဖို့ ကျနော်မျှော်လင့်နေကြောင်းပါခင်ဗျာ ............... :6:
အခုတော့ ၂၀၀၉ မကုန်မခြင်း neither Desktop nor laptop မ၀ယ်သေးပဲ ... UNICEF Laptop လေးနဲ့ပဲ အားရအောင်သုံးလိုက်ပါဦးမည် ...... ကိုမောင်ပြုံးလိုချင်တဲ့ corei7 processor လေးကိုတော့ ၂၀၉၀ ( 2090 :P ) တွင် ကျနော်၀ယ်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ....................
Computer ( Desktop or Laptop ) အရေးတကြီးမလိုအပ်သေးဘူးဆိုရင် ၂၀၀၉ နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှ ၀ယ်ရင် တော်တော်တန်မည်ဟု ကျနော်ထင်မြင်ယူဆပါကြောင်း .............. :103:
ကိုမောင်ပြုံးလိုချင်တဲ့ corei7 processor လေးကိုတော့ ၂၀၉၀ ( 2090 ) တွင် ကျနော်၀ယ်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း .................... :d
ဟေ့လူကြီး မြန်မာသက်ကရာဇ်လား အင်္ဂလိပ်သက်ကရာဇ်လား ပြောဦး :d